BEDZA British Aerospace Nimrod Package FSX & P3D - Rikoooo
Created 31-01-2011 00: 17: 37
Akachinja 29-08-2017 18: 02: 52
Munyori: Muenzaniso waBrian Franklin (Simshed). Cockpit uye instrumentation naJim Cooper, kufanana neFSX / P3D naFilipi Wallaert, Rikoooo
Yakavandudzwa pa 29 / 08 / 2017: Nhamba itsva ye 2D yakagadzirirwa nzvimbo huru (16 / 9), kuwedzerwa ikozvino inobatana ne Prepar3D v1, v2, v3 uye v4. Automatic installer version 10
The Hawker Siddeley Nimrodhi ndiye nepagungwa patrol ndege yacho Royal Air Force. Ndicho mutsivi ari Avro Shackleton. Zvinonzi inobva De Havilland kometi sezvo Hawker Siddeley (zvino Bae Systems zvakabatanidzwa) zvachinja.
Iyi purazi yakakwana ine mienzaniso yeNimrod MR1, MR2 uye R1. Mifananidzo yakawanda (repaints) yemuenzaniso wega wega yakaiswa.
I-add-on yakagadzirirwa kurongedzwa kubva kubhenji revhareji (VC) asi jenzura re2D rakaiswawo. nakidzwa nayo.
A chikara noruzivo rwokugadzira zvinhu zvikuru muvhimi Ngarava dzepasi pemvura. Zvakagadzirirwa kubva pakutanga ndege airliner, iyo kometi, zvikabva zvaita of Hawker Siddeley Nimrodhi wokutanga akabvisa nguva yokutanga May 23, 1967. Musikana kutiza yechipiri zvikabva rakanga location2 mwedzi gare gare.
Kunyange zvino, Nimrodhi mugungwa ushori mberi mishoni yavo inokosha. The Nimrodhi vane nenhoroondo dzavo mazana vakabudirira mishoni
Mungarava, kana club hurongwa, Ngarava dzepasi pemvura, ndege nekuonekwa kana zvokuongorora zvokushandisa savakadzingiswa vakuru uye NCOs vanoshandisa
Zviri mudziyo inokwanisa patrol nokukurumidza uye refu mishoni, iye Nimrodhi MR Mk 2 ane ano midzi hurongwa, kusanganisira radar, mumwe magnetometer uye marongedzero-digital kubudiswa acoustic mashoko.
Inogona kutakura renyukireya kudzika mhosva kana akawanda kana torpedoes kana mumigodhi guru BUNKER zvombo. chikwata ichi chiri vakapakata pasi-bapiro kuda pfungwa iyo chinogona kubatanidzwa-mhepo zvombo kana Anti-chikepe zvombo.
Downloads: 13 095
Downloads: 8 221
Downloads: 16 370